Church of Epiphany - Catholic Archdiocese of Yangon
Fr. Marcian Thet Kyaw (Pastor).
18, Chit Yeik Mon Lane Kaweichan, Mayangone Tsp Bayint Naung P.O., YANGON Tel: +95 (0)1 662112 (Pastor) Fr. Marcian Thet Kyaw (Asso. Pastor) Fr. Martin Zaw Zaw Naing.
Daily Masses: 6:30a.m.(Eng.,Myan & Kayin alternatively).
Sunday Masses: 7:00a.m.(Myan.),5:00a.m.(Myan.)
Church of Epiphany (Kaweichan)
Epiphany parish is in the suburbs of Yangon, Kaweichan Quarter in Mayangone Township, established just recently on6January 2003 at the time of Bishop Sotero Phamo, the Apostolic Administrator of the Archdiocese of Yangon and Bishop of the diocese of Loikaw.
In 1978, during the time of Archbishop Emeritus Gabriel Thohey Mahn Gaby there were weekly Sunday Masses for the nearby faithful at the Epiphany chapel and the Archbishop himself celebrated the Eucharistic Celebrations. Later on, the visiting priests from the Catholic Major Seminary of Yangon and the Catholic Bishops’ Conference of Myanmar took turns to celebrate Sunday services.
On6January 2003, the Epiphany Parish was set-up, being dismembered from the St. Lazarus’ Church, Insein Parish, Insein Township. There are over 700 Catholic faithful which accounts toaflourishing community with two religious Sisters (SFX) helping in the parish work.
ဤသာသနာသည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိလေသည်။ ၁၉၇၈ ခု ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ကြီး ဂေးဗြီအဲသိုဟေးမန်းဂါဘီ လက်ထက်၌ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း၊ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွရောက်၍ မစ္ဆားပူဇော်ခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်း၌ ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ CBCM မှဘုန်းတော်ကြီးများ တစ်လှည့်စီ သွားရောက်၍ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းများကို ဦးဆောင်ခဲ့လေသည်။ ၂၀၀၃ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့မှ အင်းစိန်၊စိန်လာဇရူးသာသနာမှခွဲထုတ်ပြီး-သီးခြားသာသနာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့လေသည်။လက်ရှိဘာသာဝင်ဦးရေ ၇၀၀ ခန့်ရှိပြီး၊လူငယ်များ၊ ဘာသာဝင်များ အားတက်သရောလှုပ်ရှားလျှက်၊ ကျောင်းထိုင်ရဟန်းတစ်ပါးနှင့် သီလရှင်နှစ်ပါးတို့ကသာသနာ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြလေသည်။